केही प्रेरक प्रसङ्ग | Ratopati
personसुजन तिमल्सिना exploreकाठमाडौं access_timeभदौ १३, २०७७ chat_bubble_outline0
यस भनाइपछि सहायक गम्भीरतापूर्वक सोच्न थाले.. ।
दिनभरिको थकानले एक पटक आइन्स्टाइन नुहाउन भनेर बाथरूम छिरे । छिरेको धेरै समय बितिसकेपछि पनि बाहिरै निस्किएनन् । उनकी बहिनी कोठामा उनको पर्खाइमा थिइन् । अब निस्केलान्, अब निस्केलान् भनेर कुर्दा कुर्दा ननिस्किएपछि उनलाई डर लाग्यो... र ढोका ढक्ढक्याउँदै बोलाइन् ।
केही समयपछि आइन्स्टाइन जस्तो छिरेका थिए उस्तै ननुहाई हातमा टबेल बोकेर बाहिर निस्किँदै भने, ‘आई एम् सरी, म त आफ्नै विचारमा हराउँदा हराउँदै नुहाउन नै बिर्संेछु ।’ यति भनेर फेरि नुहाउन बाथरुम छिरे ।
‘राजा विक्रमादित्य र महाकवि कालीदास बीच वार्तालाप भइरहेको थियो । महाकवि कालीदासलाई राजाले प्रश्न गर्नुभयो ।
राजालाई कलीदासको उत्तर दिने शैली असाध्यै मन पथ्र्याे ।
राजा विक्रमादित्यको राजालाई प्रश्न थियो–
कविज्यू, तपाईं असाध्यै विद्वान् हुनुहुन्छ । तर तपाईंको शरीर भने बुद्धि जस्तो सुन्दर छैन । यसको कारण के हुन सक्छ.. ?
प्रश्न पछि राजा उत्तरको प्रतीक्षामा थिए...
केही बेरमा राजाले सेवकलाई पानी ल्याउन आदेश दिए । कालीदासले सेवकलाई इसारा गर्दै एउटा माटोको भाँडा र अर्काे चाँदीको गिलासमा पानी ल्याउन आदेश गराए । सेवले पानी टक््रयायो । महाकविले राजालाई दुवै गिलासको पानी पिउन आग्रह गरे । आग्रह स्वीकार्दै राजाले दुवै गिलासको पानी पिए ततपश्चात् कालीदासले विनम्रतापूर्वक राजालाई प्रश्न गरे ।
महाराज यी दुईमध्ये कुन चाहिँ गिलासको पानी हजुरलाई बढी शीतल लाग्यो ? राजाले सरलतापूर्वक जवाफ दिए– पक्कै पनि माटोको गिलासको पानी बढ्ता शीतल र केही हदसम्म मीठो पानी रहेको बताए । जबाफ सुनेर कालीदासले मुस्कुराउँदै जबाफ दिए ।
‘जसरी पानीको शीतलता भाँडाको सुन्दरतामा निर्भर हुँदैन त्यसैगरी मान्छेको बुद्धिको सुन्दरता पनि उसको सुन्दरतामा निर्भर हुँदैन ।’ दुवै प्रश्नको उत्तर पाएपछि राजा अकमक्क परे ।
अब्राहम लिङ्कनको सफलता
अब्राहम लिङ्कन एक साधारण व्यक्ति कसरी राष्ट्रपति भए भन्ने कुरा सबैमा कौतुहलजनक थियो । एक पटक पत्रकारहरू अब्राहम लिङ्कनलाई भेटेर प्रश्न सोध्दै थिए ।
उनीहरूको प्रश्न थियो– ‘तपाईं एक साधारण मानिसबाट राष्ट्रपति जस्तो उच्च पदमा कसरी पुग्नु भयो ?’
अब्राहम लिङ्कनले मुस्कुराउँदै ती पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै भने– मैले आफ्नो जीवनको पाइला पाइलामा परीक्षा लिएँ । हरेक असफलताबाट केही न केही नयाँ कुरा सिकेँ । म नहडबढाई सम्हालिएँ र आफ्ना कमीकमजोरी, त्रुटि सुधार्दै नयाँ बाटो बनाउँदै अघि बढेँ । यस प्रकार म साधारण मानिसबाट आज राष्ट्रपति बनेँ ।
आइन्स्टाइनको महान बन्ने सूत्र
‘लगन’ आइन्स्टाइनले मुस्कुराउँदै भने, ‘यसको सूत्र लगन हो । जब म तिम्रो उमेरको थिएँ तब गणितदेखि डराउँथे, जस्तो आज तिमी डराउँछौ । म धेरैजसो गणितमा फेल हुन्थेँ । मैले सजाय पाउँथे, मेरा साथीहरू मलाई जितेर अघि बढ्थे । उनीहरू मेरो मजाक उडाउँथे । म मन मारेर बस्थँे ।
एक दिन मैले सोचेँ आखिर ममा कुनै कमी त छैन, फेरि पनि म किन गणितदेखि डराउने गर्छु ? बस् त्यो दिनदेखि मैले गणितका प्रश्नहरूको समाधान निकाल्न थालेँ । याद राख, म बारम्बार असफल पनि भएँ । साथीहरूले खिल्ली उडाउन छोडेनन् तैपनि ममा लगन थियो कि गणितको समस्या समाधान गरेरै छोड्नेछु । यही लगनले मलाई आज यहाँसम्म पु¥यायो । लगन नै सफलताको सूत्र हो, गुरुमन्त्र हो । यसर्थ लगन कहिल्यै नछोड्नु तिमीले ।’